दुःख कष्टलाई पन्छाउन चाहानुहुन्छ भने :यस्ता #ऊ मन्त्रहरु जप गर्नुहोस्- अवस्य मुक्ति मिल्छ !
हामीले पूजा गर्दा कहिले काही भुल हुने गर्छ। यस्तो अबस्थामा के कस्ता कार्य गर्न पर्छ भनेर थोरैलाई मात्र थाहाँ होला।ज्योतिष शास्त्रअनुसार पूजाको समय केहि गल्ती भएमा यस मन्त्रको जप गर्नु पर्दछ जसले भुललाई क्षेमा गरी शुभ फल प्रदान गर्दछ। यस्तो छन मन्त्र…तिन पाच सात चोटीपढ़नुहोला !!
मन्त्र – अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया।दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर।।गतं पापं गतं दु:खं गतं दारिद्रय मेव च।आगता:
सुख- संपत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात्।। अर्थ – हे परमेश्वर। मद्वारा रात-दिन हजारौ अपराध भई नै राख्छ। यो मेरो दास हो । यस्तो सम्झेर मेरो ती अपराधलाई कृपापुर्वक क्षमा गर्नुहोस। तपाईको दर्शनबाट मेरो पाप र दु:ख नाश होस, दरिद्रता हटोस्। सुख सम्पत्ति प्राप्त होस्। यस्तो बरदान दिनुहोस्।
यी कुराको ख्याल राख्नुहोस्…प्रत्येक पूजाको अन्तिममा यस मन्त्रको जप गर्नुहोस जसले भगवानको कृपा रहिरहन्छ।यदि देवीको गर्ने हो भने परमेश्वरको स्थानमा परमेश्वरी बोल्नुहोस। मंत्र जप वा पाठ गरेपछि यस मन्त्र जप्न सक्नुहुनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् – भाग्यमानीसँग हुने यी ६ कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ?
काठमाडौं _ हरेक मानिसको जिवनमा सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भईराख्दैन । यसै प्रसंगलाई लिएर महाभारतमा पनि विदुरले भनेका छन्, यदी कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ ।
श्लोक यसप्रकार छन : अर्थाथमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीव लोकेषु सुखानि राजन् ।। अर्थ : धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो बोल्ने, आज्ञाकारी पुत्र र धनप्राप्त गर्ने विद्या यी ६ कुराले मानिसलाई सुख दिन्छ ।
यस्तो स्थितिबाट बच्नको लागि तपाई सँग यस्तो ज्ञान हुनु पर्यो जसले भएको धन नष्ट पनि नहोस् र काम पनि बनोस् । यदि तपाईंसँग पैसा छैन तर कला छ भने तपाई त्यसप्रकारका कामहरू गर्न सक्नु हुन्छ । सम्मान पूर्वक जिवनयापन गर्न सक्नु हुन्छ । यो सन्द्देश आफ्नो आफ्न्त साथीअरु सम्म पुर्ययाउन सेयर गर्नुु होला ।-साझा चौतारी